TeamSpeak Client, logiciel fihaonambe feo maimaimpoana | Ubunlog
TeamSpeak Client, rindrambaiko fanaovana fihaonambe feo maimaim-poana
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny fomba ahafahantsika mametraka ny TeamSpeak Client amin'ny Ubuntu. TeamSpeak (TS) dia Voice over Internet Protocol (VoIP) ho an'ny fifandraisana am-peo eo amin'ny mpampiasa amin'ny fantsona chat. Ny lozisialin'ny mpanjifa dia mifandray amin'ny mpizara TeamSpeak azo safidin'ny mpampiasa, izay ahafahan'izy ireo miditra amin'ny fantsona chat (ny sasany ampahibemaso ary ny sasany tsy miankina).
Mpilalao no kendrena ho an'ny TeamSpeak, izay afaka mampiasa ny rindrambaiko hifandraisana amin'ireo mpilalao hafa ao amin'ny ekipa iray ihany amin'ny lalao video marobe.. Ity rindrambaiko ity dia azo apetraka maimaim-poana amin'ny rafitra fiasa lehibe rehetra. Amin'ireto andalana manaraka ireto dia ho hitantsika ny fomba ahafahantsika mametraka ny mpanjifa TeamSpeak Ubuntu.
1 Fametrahana ny mpanjifa TeamSpeak amin'ny Ubuntu
1.1 Ampidino ny installer TeamSpeak
1.2 Mamorona launcher ho an'ny fampiharana
Fametrahana ny mpanjifa TeamSpeak amin'ny Ubuntu
Azontsika atao ny mametraka ity programa ity amin'ny alàlan'ny installer izay hitantsika ao amin'ny tranokala TeamSpeak.
Ampidino ny installer TeamSpeak
Mba hampiasana ny installer dia ilaina ny misintona azy. Ho an'ity isika dia hitsidika ny pejy izay avy misintona ny mpanjifa ofisialy avy amin'ny TeamSpeak. Tsy maintsy lazaina fa amin'ity pejy ity dia hahita installer 32 sy 64-bit (raha toa ka mahasoa na iza na iza ny 32-bit).
Rehefa avy nisintona ilay rakitra izahay dia tsy maintsy ataonay ho azo tanterahana ny fametrahana azy amin'ny rafitray. Mba hanaovana izany, dia ilaina ny mandeha any amin'ny lahatahiry izay notahirizinay ny rakitra izay vao alainay. Indray mandeha dia ilaina ny manatanteraka ity baiko manaraka ity amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) mba hahatonga ny rakitra azo tanterahana:
Rehefa efa executable ny rakitra dia afaka miroso amin'ny apetraho ao amin'ny rafitray izany. Mba hanaovana izany dia hanoratra amin'ny terminal iray ihany isika:
Se angatahinao izahay hamaky ny fifanarahana momba ny lisansa alohan'ny hirosoana amin'ny fametrahana. Raha tsy te hamaky ny lahatsoratry ny fifanarahana fahazoan-dàlana ianao, azonao atao ny mandingana azy amin'ny fanindriana ny litera q. Ny dingana fametrahana dia somary fohy.
Mamorona launcher ho an'ny fampiharana
Rehefa nanokatra ny installer avy amin'ny lahatahiry Downloads izahay, dia eo no hahitantsika ny programa napetraka. Midika izany fa ny mpanjifa TeamSpeak dia ho napetraka amin'ity lalana manaraka ity:
Noho izany antony izany, tsy maintsy hamindra ity lahatahiry ity amin'ny toerana hafa isika. Mba hanaovana izany dia hampiasa ity baiko manaraka ity izahay:
Rehefa avy namindra ny mpanjifa TeamSpeak, Ilaina ny mamorona mpandefa mba hahafahana manomboka amin'ny fomba milamina ny programa avy amin'ny menio Applications. Amin'izany fomba izany dia tsy voatery manomboka amin'ny lahatahiry fametrahana ianao. Afaka manao izany isika amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny tonian-dahatsoratra ankafizintsika toy izao manaraka izao:
Rehefa vita ny baiko etsy ambony, hametaka ny andalana misy kaody ao anaty rakitra isika:
Rehefa mametaka azy isika dia mijanona fotsiny ny mitahiry ilay rakitra ary miverina amin'ny terminal. Afaka izao isika atombohy tsy misy olana ny programa amin'ny fitadiavana ny mpandefa fandaharana amin'ny solosainay.
Rehefa manomboka ny programa, tsy maintsy miditra amin'ny kaontintsika isika (azo noforonina maimaim-poana ao anatin'ny fotoana fohy), ary rehefa tafiditra ao anatin'ny programa dia ho afaka miditra amin'ny firafitry ny mpanjifa avy amin'ny safidy. Ireo dia haseho amin'ny varavarankely toy ny etsy ambany.
Raha te hanaisotra ny TeamSpeak amin'ny rafitra fiasanao ianao, amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia hanomboka amin'ny esory ny mpandefa izay noforoninay teo aloha. Tsy maintsy manoratra ny baiko ihany isika:
Andao izao esory ny lahatahiry nafindranay nandritra ny fametrahanaihany koa Hofafanay ihany koa ireo rakitra fikirakirana hita ao anatin'ny lahatahiry an-tranon'ny mpampiasa. Hanao izany amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny terminal iray ihany izahay:
TeamSpeak dia rindrambaiko fihaonambe feo maimaim-poana izay hita azo apetraka amin'ny Gnu / Linux, Windows, macOS, FreeBSD, ary Android. Izany dia ahafahana miditra malalaka amin'ny mpiasam-panjakana manodidina ny 1000, na dia ho hitantsika manokana ihany koa izy ireo. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny TeamSpeak, ny mpampiasa dia afaka mandeha any amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » TeamSpeak Client, rindrambaiko fanaovana fihaonambe feo maimaim-poana
Saingy ity fampiharana ity dia tsy natao ho an'ny fihaonambe, fa ho an'ny fifandraisana eo amin'ny mpilalao Esport.
Valio an'i Jonatha
Ny GNOME dia manao veloma amin'ny 2021 miaraka amin'ny fanatsarana bebe kokoa amin'ny fitaovan'ny pikantsary sy ny Tangram, ankoatry ny hafa
Efa nivoaka ny Avidemux 2.8 ary ireo no vaovao